Igbo, Romans, Lesson 030 -- Peace, Hope, and Love Dwell in the Believer (Romans 5:1-5) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 030 (Peace, Hope, and Love Dwell in the Believer)
1. Udo, olile anya na ihunanya bi n’ebe onye kwere ekwe (Ndi Rom 5:1-5)
NDI ROM 5:1-2
1 Ya mere, ebe emere ayi ka agu n’onye ezi omume site n’okwukwe, ayi na Chineke di n’udo site n’aka Onye-nwe-ayi Jisos Kraist, 2 onye ayi sitere n’okwukwe bata n’onye amara a nke anyi guzo n’iru ya, na a rejoiceuri n’olileanya nke ebube nke Chineke.
Mmad natural mmad natural tara nr lives na Chineke na esemokwu. Mmadu nile nemebi iwu megide Onye Nsọ, ebe obu na agutawo nmehie ayi. N'ihi nke a, ekpughere iwe Chineke megide asọpụrụghị Chineke na ajọ omume nile nke mmadụ.
Ugbu a Kraist nwụrụ n’obe, ma mekwa ka mmadụ na Onye-nwe-ha dị n’otu, anyị abatawo n’udo nke udo n’ihi na Ọkpara wepụrụ mmehie nkewapụ, amara nke nzọpụta nke Chineke apụtawo ìhè n’ebe mmadụ niile nọ. Lee ka ngozi, nnwere onwe, na izu ike dịruru ndị kwere na Chineke, site na Kraịst, Onye Nzọpụta! Enweghị udo dịịrị ndị na-eme ihe ọjọọ, na ezighi ike maka mkpụrụ obi, belụsọ site na nkwenye na Ndị Akpọkpochara.
Kraist sachara ma doo anyi nsọ ka onye obula kwere na ogbugba ndu ohu nwere ike inabata nnukwute ihe oma, nke enyere n’onye ogbugba ndu ochie ka enyere onye isi nchu aja, onye banyere n’ime Ebe Nsọ di nso otu ugboro n’uwa ikpuchiri umu Israel nmehie ha. mmehie ha. N'oge nke ọnwụ Kraịst, otu ọ bụla, ihe mkpuchi nke Ebe Nsọ kachasịnụ abụọ, yabụ anyị nwere ikike ịkwụ ọnụnọ nke Onye Nsọ. Ọ na-akpọ mmadụ niile ka ha bịakwute ya na ntụkwasị obi, hụ na ọ bụghị egwu, ma ọ bụ onye mbibi, ma ọ bụ nọ anyị nso, kama, ọ bụ Nna na Onye Nzọpụta, onye juputara na ịhụnanya na ebere. Ọ na-atụ anya na ekpere anyị, na-aza arịrịọ anyị, ma na-eji anyị agbasa ozi ọma nke Ọkpara ya ka e wee weta ngọzi nke ịkwụsịrị obe maka ndị niile na-achọ izu ike maka mkpụrụ obi ha.
Mgbe Kraist siri na ndi nwuru anwu bilie, o kelere ndi neso uzo ya otutu mgbe, si ha “udo diri unu” nke putara ihe abuo:
Chineke agbagharala gị mmehie gị niile n'ihi ahụhụ Jizọs.
Bilie, gaa nụ, zisa ozi ọma; n'ihi na Jizọs nyere gị iwu: “Dịka Nna zitere m, Mụ onwe m eziga gị”. Onye kwere na Jizos, udo ya na udo, obughi maka nke onwe ya, kamakwa ka o buru ndi na-eme udo nke Kraist gbara, ma kporo umu nke Chineke.
Na mgbakwunye na udo nke obi, nke sitere na izi ezi, nnabata anyị n'ihu ocheeze nke Onye Nsọ, na ọrụ anyị ịgbasa amara ahụ, Pọl na-egosi anyị na anyị nwere olile-anya nke karịrị nghọta niile: Chineke kere anyị na ya onyiyi, mana nihi mmehie anyi, anyi tufuru otuto anyi. Ugbu a olile anya ahu bi n’ime obi anyi site na Mmuo Nso, Chineke na-enyeghachi anyi otu ebube ahu, nke o nwere, nke na-esikwa n’onwu ya puta. Ebube Chineke diri gi? Ì jidere olile-anya ahu enyere gi aka? Ọdịnihu anyị abụghị echiche efu, ịkọ ma ọ bụ ịchọ; kama emere ya site n’ike nke Mo Nso n’ime anyi, onye bu nkwa nke ebube nke aga ekpughere anyi n’ime anyi.
NDI ROM 5:3-5
3 Ọbụghị naanị nke ahụ, kama anyị na-anya isi na mkpagbu, na-amara na mkpagbu na-eweta ntachi obi; 4 na ntachi obi, agwa; na agwa, nchekwube. 5 Ugbu a olile-anya adighi-emechu mba, n'ihi na awusiwo ihu-n'anya nke Chineke n'obi-ayi site n'aka Mọ Nsọ nke enyere ayi.
Anyị ebighi n’eluigwe, kama n’ụwa. Dịka Jizọs gabigara ụdị ahụhụ na mkpagbu nile, otu a ka anyị ga-eji nwe okwukwe, na okwukwe na mkpụrụ osisi ime mmụọ, mwakpo nke mmadụ, ọrịa na echiche ọjọọ nke mmụọ. Agbanyeghị, Pọl edeghị banyere eziokwu ndị a site na anya mmiri na ịsụ ude, kama o kwuru, sị: Anyị na-anya isi n'ihi mkpagbu anyị, n'ihi na ha bụ ngosipụta nke Kraịst anyị. Ka anyị soro ya na mkpagbu ya, anyị ga eso ya wee nye otuto. Yabụ, mee ihe niile n’enweghị ntamu, n’ihi na Dinwenu gị dị ndụ na onweghị ihe ga-eme ma ọbụ n’enyeghị ya ikike.
Ibu ibu arọ nke ụwa na-eduga anyị na ngọnarị nke ịchọ ọdịmma onwe anyị nanị, ọnwụ nke ịmara ihe anyị, ime ka uche anyị dị ọcha, na ido onwe anyị n'okpuru nduzi Jizọs. Anyị inwe ndidi karịa n’ime anyị, anyị na-enwe olile anya n’ebe Jizọs nọ na nnyonye anya ya. N'ụlọ akwụkwọ nhụjuanya, anyị na-amụta otu esi ahapụ enweghị ike anyị, na-ejide n'aka, dịka Abraham, na Chineke na-enwe mmeri n'agbanyeghị ọdịda anyị.
N’ime mgba nke mmụọ a, anyị nwere ihe ùgwù isite n’ihe ahụ mere Abraham n’ihi na n’oge amara ka etinyere ịhụnanya nke Chineke n’ime ndụ anyị, obi anyị, site na Mụọ Nsọ, ezi Chineke, nke enyere anyị. . Amaokwu nke 5 isi 5 mara mma nke ukwuu nke na anyị enweghị ike ikwu ya. Jiri obi gị mụta amaokwu a, n'ihi na ọ bụ akụ nke Akwụkwọ Nsọ. Onweghị Nohụnanya ma ọ bụ obi ebere nke mmadụ awasara n’ime obi anyị, kama na ọ bụ ịhụnanya ebighi ebi, nke a na-akọwaghị, nke Chineke, nke bụ Chineke n’onwe ya. Ọ birighi n’ime obi anyị, kama awụpụ ya, ọ bụghị n’ihi ịdị mma anyị, kama n’ihi na ọbara nke Kraịst mere ka anyị dị ọcha. Ọ bụ ya mere mmụọ nsọ ji nwee ike ibi n’ime anyị, na-atụgharị anụ arụ anyị na-anwụ gaa n’ụlọ nsọ nke Chineke. Ihe nke elu igwe a bu njirimara na ike nke Chineke, nke Kraist n’enye onye obula nke kwere na ya. Ndi nile natara mmụọ nke ihunanya Chineke na-enwe ọmụmụ nke abụọ, ime ka ha dị ọhụrụ, ma mata na ndụ ebighi ebi dị n’ime ha. Agbanyeghị, ebe obibi nke mmụọ nsọ n’ime anyị abụghị naanị ime ka udo nke onwe anyị dịkwuo mma, kamakwa iji mee ka ndidi anyị sikwuo ike ka anyị wee nwee ike were ọ joyụ buru ndi siri ike, ma hụ ndị iro anyị n’anya na omume, na ọzọkwa, ka anyị ghara ịda n’idozi nsogbu nke ndụ anyị. Kraịst ahapụghị anyị ka ụmụ mgbei, kama o nyere anyị ike ya, ịhụnanya ya na nkwa nke ebube nke a ga-ekpughe niile n’otu mgbe.
EKPERE: Anyị na-efe gị Nna, Ọkpara, na Mụọ Nsọ, nihi na ị jụghị anyị, mmadụ nwụrụ anwụ, ikpuru, mana ị wụsara ihunanya gị dị nsọ n’ime anụ arụ anyị, ka anyị wee hụ ike nke mmụọ gị, ma kwere. ka ndu-ayi we ghọrọ ima-nma nke obi-ebere-Gi. Anyi n’ekele Gi, gozie Gi, ma rejoiceuria n’abia n’iru Gi n’obi anyi. Nyere anyị aka ime ihe dịka ịhụnanya gị si dị.
Gini mere eji eme udo nke Chineke na ndu anyi?
Page last modified on January 26, 2021, at 03:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)